Dadaalada gurmadka dadka ku waxyeeloobay fatahaada Beledweyne oo ka bilaabmay Puntland - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandDadaalada gurmadka dadka ku waxyeeloobay fatahaada Beledweyne oo ka bilaabmay Puntland
October 30, 2019 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Dad ay fatahaadu saamaysay Beledweyne. [Isha Sawirka: Facebook]
Garoowe-(Puntland Mirror) Dadaalada gurmadka loogu uruurinayo dadka ku waxyeeloobay fatahaada Beledweyne ayaa maanta oo Khamiis ah ka bilaabmatay magaalooyinka waa-weyn ee Puntland.
Dhalinyaro is abaabushay ayaa lagu arkayay gudaha magaalada Garoowe ee caasimada Puntland kuwaasoo dadka ka uruurinaya qof walba waxa uu ku deeqi karo lacag, dhar iyo cunaba.
Boosaaso, xarunta ganacsiga Puntland, culimada ayaa sheegtay in $164,000 kaash oo ah lacag ka hartay gurmadkii abaartii 2017 ka dhacday Puntland hadda loogu deeqayo dadka ku waxyeeloobay fatahaada Beledweyne.
Dad lagu qiyaasay 164,000 qof ayaa ka cararay guryahooda gudaha magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan markii biyha ay ku fataheen magaalada kadib webiga Shabeelle oo qarqarka jabsaday.
Fatahaada oo ay keeneen roobab mahiigaan ah ayaa burburiyay dhul-beereedkii, kaabayaasha iyo waddooyinka gobolka.
Baarlamaanka Puntland oo ansixiyay ajandaha kalfadhigooda 45-aad
Labo caruur ah oo ku dhimatay shil gaari oo ka dhacay Muqdisho
Muqdisho-(Puntland Mirror) Labo caruur ah ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay magaalada Muqdisho saakay oo Arbaco ah, sida ay sheegeen dadka deegaanka. Gaari ayaa jiiray labada caruurta ah oo ka tallaabayay waddo kutaala degmada [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Golaha aqalka sare ayaa maanta oo Talaado ah meelmariyay xeerka warbaahinta Soomaaliya. Xeerka ayaa waxaa ogolaatay 23 xildhibaan, waxaa diiday saddex, halka uu hal mid ka aamusay, sida uu sheegay guddoomiyaha aqalka sare [...]